ကံမယုံသူ သဂျီး နှင့် Billionaire မဖြစ်သူ ကြောင်ကြီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ကံမယုံသူ သဂျီး နှင့် Billionaire မဖြစ်သူ ကြောင်ကြီး
ကံမယုံသူ သဂျီး နှင့် Billionaire မဖြစ်သူ ကြောင်ကြီး
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on Aug 28, 2011 in Aha! Jokes, Satire, Drama, Essays.. | 27 comments
သဂျီးမရလိုက်တဲ့ တဘီလျံတပြားလျော့ ငွေသေတ္တာ
ကယ်ကြပါအုံးဗျာ၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းတထောင်ပြည့်ဖို့ တပြားပဲလိုတော့တယ်၊ ပြည့်သွားရင် ဦးကြောင် ဘီလျံနာဖြစ်ပြီ။ သန်းထောင်ကြွယ် သူဌေးဖြစ်ဖို့ကို ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ခလေးဘဝထဲက အိမ်မက် မက်ခဲ့တာပါ။ စားလည်းဒီစိတ် သွားလည်းဒီစိတ် အီးပါသေးပေါက်လည်း ဒီစိတ်တခုထဲနဲ့ အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်အတွက် နာမည်ကောင်းရဖို့ တခုထဲမဟုတ်ဘဲ ကမာ္ဘမှာမြန်မာဟေ့လို့ ကြွေးကြော်စေချင်တဲ့ အများ အကျိုးဆောင်ချင်တဲ့ စိတ်လည်းပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်လေဗျာ၊ ကျုပ်သာ ဘီလျံနာဖြစ်သွားရင် ကမာ္ဘကျော် ဖိုဘီမဂ္ဂဇင်းမှာ နှစ်စဉ်ဖော်ပြတဲ့ ကမာ္ဘတလွှား ဘီလျံသူဌေးစာရင်းမှာ ပထမဆုံး မြန်မာနိုင်ငံသား တဦးအနေနဲ့ ခင်ဗျားတို့လည်း ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားနိုင်မှာပေါ့။
သန်းတထောင်ပြည့်ဖို့ ငွေရမဲ့အလုပ်မှန်သမျှ ကုန်းရုန်းလုပ်ခဲ့၊ အန္တရာယ်အသွယ်သွယ် ဖြတ်ကျော် စီးပွားရှာခဲ့တယ်။ ကမာ္ဘပေါ်မှာ ကျုပ်မရောက်ဘူးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံဆိုတာ မရှိဘူး၊ အီရတ်စစ်ပွဲ ဖြစ်တုန်းကလည်း ကျည်ဆံအခွံ သွားကောက်ခဲ့တယ်၊ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာလည်း တာလီဘန်တွေ ခေတ်ကောင်းစဉ်က ခေါင်းမှီးခြုံ ဝတ်စုံတွေ စွန့်စွန့်စားစား မှောင်ခိုသွားရောင်းခဲ့သေးတယ်။ အို..လုပ်ခဲ့တာ အစုံပါဘဲ။ ငွေရှာတာတင်မက အသုံးအဖြုန်းမကြီးဘဲ တတ်နိုင်သလောက် ခြွေတာစုဆောင်း ခဲ့ပါသေးတယ်။ ယုတ်စွအဆုံး အိမ်ထောင်မပြု ခဲ့ဘူးဗျာ။ ကျုပ်အချစ်ဆုံး ရည်းစားကိုတောင် သူငယ်ချင်းနဲ့ ချိတ်ပေးပြီး အောင်သွယ်ပွဲခ ယူခဲ့သေးတယ်။ ရည်မှန်းချက်အတွက် အရာရာကို စွန့်ခဲ့တာကို သိအောင်ပြောတာပါ။
ကုန်ကုန်ပြောမယ်ဗျာ၊ အခုမှတော့ ဖွက်ထားစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ အသက်အရွယ်ထောက်လာလို့ စီးပွားမရှာနိုင်ချိန်မှာတောင် ဝင်ငွေရဖို့ မန်းလေးဂေဇက်မှာ မြန်မာပြည်က လူနာမည်နဲ့ အကောင့်အမျိုးမျိုးဖွင့်၊ ကျုပ်က မြန်မာပြည်ပြင်ပကနေ စာရေး၊ ပြီးရင် ဂျီမေးလ်းကနေ မြန်မာပြည်ကလူတွေဆီပို့၊ သူတို့ကမှတဆင့် ရွာထဲမှာ နာမည်အသီးသီးနဲ့ စာပြန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုပေါက် (မန်း)၊ အီးတုံး၊ ဆူး တို့ကတော့ ကော်မရှင် ၃၀%တော့ ဖြတ်ယူတာပေါ့လေ။ ဒါလည်း တရားပါတယ်၊ လောကမှာ ဘယ်အရာမှ အလကားဆိုတာ မရှိတာ။ ကျုပ်ဘဝ နေဝင်ချိန်လေးမှာ ဘဝကူးကောင်းဖို့ သူတို့ခွင့်ပြုချက်မယူဘဲ ဖွင့်ပြောမိတာကို ခွင့်လွှတ်ကြပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ တလကမှ အမေရိကန်နိုင်ငံက အကောင်းဆုံး ဓာတ်ခွဲခန်းက ထုတ်ပေးတဲ့ ကွက်တိမှန် ဆေးစာအရ အသက်၁၀ဝ ပြည့်တဲ့ ကျုပ်မွေးနေ့မွေးရက် မွေးချိန်မှာ ဘဝတပါးကို ကူးပြောင်းရပါတော့မယ်။ ဗေဒင်ဆရာ ဟူးရားဖြူ၊ ဟူးရားညို၊ အွန်လိုင်းဝေဒ ဆရာအပေါင်းကလည်း မြေကြီးလက်ခတ်ရင်သာ လွဲမယ် ဒီနေ့ဒီရက်မှာ ကံကုန်ဖို့တော့ မလွဲနိုင်လို့ အတိအကျ ဆိုထားတယ်။ ကျုပ်အသက်ဆုံးရတော့မှာ သေချာ နေပါပြီ။ အရင်ကတော့ ဒီလိုစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်လာသန်းတထောင် ပြည့်သွားရင် လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့က သဂျီးအိမ်ကိုသွား၊ ဂေဇက်အယ်ဒီတာ မောင်ခိုင်ရှိလားလို့ ခပ်မာမာမေး၊ သူက အံမာ ဒီအဘိုးကြီး ငါလိုသဂျီးကို ရာရာစစနဲ့လို့ အံကြိတ်ဖြေ၊ သူ့ကို ကားနဲ့ဘဏ်ကိုခေါ်သွား၊ ဟိုရောက်ရင် ဘဏ်မန်နေဂျာရှေ့မှာ ဒေါ်လာ သန်းတထောင်တန် ချက်လက်မှတ်ကို ဟန်အမူအယာအပြည့်နဲ့ လက်မှတ်ထိုးပေး၊ သဂျီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်၊ အသက်ရှု ကျပ်လာ၊ အဲဒီအချိန်မှာ ကျုပ်က ကျောသပ်ရင်သပ် လုပ်ပေးပြီး အိမ်မက်မဟုတ်ကြောင်း၊ ကိုယ့်လက်ကိုယ်ပြန် ဆိတ်ကြည့်လျင် အသားနာမယ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ငွေဆိုတာ ရှာပြီးသုံးဖို့ဖြစ်ကြောင်း၊ ရတဲ့ဘဝတိုလေးမှာ အများ အကျိုးအတွက် တန်ဖိုးရှိရှိ အသုံးချတတ်ဖို့သာလိုကြောင်း တရားချ၊ သဂျီးခင်မျာ ခြေမကိုင် လက်မကိုင်မိဖြစ်၊ ပြန်ခါနီး လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တော့ မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ခွင့်ပန်၊ ကျုပ်က နာမည်ကောင်းရဖို့ လုပ်တာ မဟုတ်လို့ မရိုက်ရန်ပြောပြီး ထွက်လာခဲ့၊ နာရီပိုင်းအကြာမှာပဲ ဂေဇက်အွန်လိုင်းမှာ အညတရအလှူရှင်တဦးမှ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ရပ်ရွာကောင်းကျိုးအတွက် စွန့်လွှတ်လှူဒါန်းသွားခြင်း ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပို့စ်တက်လာ၊ တကမာ္ဘလုံး အုတ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်ကုန်ကြ။
နောက်ဆုံးတော့ ကျုပ်ဘဏ်လိပ်စာနဲ့ နေထိုင်ရအိမ်ကို သူရောက်လာပြီး ကျေးဇူးတင်စကားဆိုမယ်၊ အဲဒီအချိန်မှာ ကျုပ်ဘဝနောက်ဆုံးအချိန် ရောက်နေပြီ။ သူ့ကိုကျုပ်က အတ္တမကြီးဖို့၊ တရားစစ်တရားမှန်ရှာဖို့ ကိုယ်သိမြင်ထားတာတွေကိုသာ အဟုတ်ထင်ငြိတွယ်မနေဖို့ ဆုံးမစကားဆိုမယ်။ သဂျီး နာယူခံခက်ဖြစ်နေတုံး ဗြုန်းဆိုကျုပ်က ဘုရားအလောင်း အရိမေတ္တေယျနတ်သား ဘယ်ဘုံမှာစံနေလည်းလို့မေးပြီး စာရွက်အလွတ်မှာ တုသိတာနတ်ပြည်လို့ ရေးခိုင်းမယ်၊ နောက်တော့ အဲဒီစာရွက်လေးကို အဓိဌာန်ပြီး သူ့ရှေ့မှာတင် အထက်ကို မြောက်တင်လိုက်မယ်၊ စာရွက်ဖြူလေးက တလူလူလွှင့် အထက်ကိုဆန်တက်ပြီး လေထဲအထက် တနေရာမှာ ဗလာချီရပ်တည်နေမယ်။ အဲဒီအချိန်ကြမှ သဂျီး အမိုက်နောင်တရပြီး အံ့ဩတုန်လှုပ်ကြီးစွာနဲ့ သိမှတ်ပြောမှား ခဲ့သမျှအားလုံးကို ဝန်ချတောင်းပန်နေစဉ် ကျုပ်က သာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်ပြီး နတ်ရွာစံလိုက်မယ်။
အခုတော့ ငွေလေးတပြားအတွက်နဲ့ ကျုပ်ရည်မှန်းချက် ပျက်ပါပြီ။ နံရံမှာကပ်ထားတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် နာရီကလည်း ကျုပ်အသက်တရာပြည့်မဲ့မွေးချိန် အတိအကျရောက်ဖို့ ရေတွက်ပြနေတယ်၊ တဆယ် ကိုး ရှစ်…ကျုပ်အာတွေခြောက် မျက်လုံးတွေပြာလာပြီ၊ ကောင်းကင်မှာလည်း နတ်ပန်းရထား ခြောက်စင်းသာမက ဗြဟ္မာပြည်က တမန်တော် တွေလည်း သူ့ဆီလာလှည့်ပါ၊ ငါဆီလာလှည့်ပါနဲ့ အလုအယက် ခေါ်နေကြပြီ။ ဘဏ်ထဲမှာ အပ်ထားခဲ့မိတဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ကိုးရာကိုးဆဲ့ကိုးသန်း ကိုးသိန်းကိုးသောင်း ကိုးထောင်ကိုးရာ ကိုးဆဲ့ကိုးဒေါ်လာ ကိုးဆဲ့ ကိုးပြားသော ပိုက်ဆံတွေ သေတမ်းစာမရှိ၊ သဂျီးမရဘဲ ဖြစ်တော့မယ်။ ေဩာ်… သဂျီး သဂျီး ကံ ကိုမယုံတဲ့ အတ္တ အဓမ္မဝါဒီ ဝါးတားကာလာ ဂိုဏ်းချုပ်ကြီး ကံကောင်းပါစေ…။
ဟိုတရက်က အိပ်ပျော်နေတယ်ဆို အဲ မှားလို့စက်တော်ခေါ်နေတဲ့ ကိုကြောင်ကြီး အိမ်မက်မက်နေပါသည်။
ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်အတွက် အရာရာကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ရပေမယ့် သဂျီးကို ကောင်းစားစေချင်တဲ့စိတ်၊ သဂျီးရဲ့ အတ္တဝါဒကို ချွတ်ချင်တဲ့ စိတ်တွေနဲ့ ကိုကြောင်ကြီးခမျာ နတ်ပန်းရထားများ၊ ဗြဟ္မာ့ပြည်မှ အကြိုတော်များနောက်ကို မလိုုက်နိုင်ပဲ စိတ်ညွတ်ရာ သဂျီးအိမ်သို့ ရောက်သွားပြီးသကာလ-
ဂလုံ ဂလွမ် နှင့် အသံများ ကြားရခြင်း၊ ရီသံလိုလို၊ အော်သံလိုလို အသံများ ကြားရခြင်း၊ တံခါးများ ပြူတင်းပေါက်များ သူ့အလိုလို ဖွင့်လိုက် ပိတ်လိုက်ဖြစ်နေခြင်းများ ကြုံတွေ့နေရပါတော့သည်။
ယခင်က သရဲတွေ့လျှင် ဓာတ်ပုံရိုက်၊ လပ်စဗေးဂတ် တွင် ရုံသွင်းပြသပြီး ဒေါ်လာ ဘီလီယံချီ ဘစ်စနက်လုပ်ငန်းလုပ်ရန် အကြံပေးလေ့ရှိသော သဂျီးခမျာ-
လက်တွေ့တွင်မူ အကြောက်လွန်၍ မမြင်အပ်သောလောကမှ နာနာဘာဝ၊ ဝိနာဘာဝများအား အမျှအတမ်းပေးဝေရန် စဉ်းစားရာ ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သော ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ ကုသိုလ်တရားများ လောက်လောက်လားလား မရှိ၍လည်းကောင်း၊
မမြင်အပ်သော လောကသို့ ရောက်ရှိသွားသူ ကိုကြောင်ကြီးမှာ တရားဓမ္မများ ဟောပြောပြသရာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးများနီးပါး တတ်သိနေခြင်းတို့ကြောင့်လည်းကောင်း၊
နောက်ဆုံးတွင် ကြံရာမရ ဖြစ်ကာ
လပ်စဗေးဂတ်တွင် ရုံသွင်းပြသမည့် အစီအစဉ်ကို ပယ်ဖျက်၍ သဂျီးအိမ်တွင် ခြောက်လှန့်လျှက်ရှိသော ကိုကြောင်ကြီးအား ဖမ်းပေးနိုင်သူအား ပွိုင့် ၁၀၀၀ဝ ချက်ခြင်းထည့်ပေးမည် ဟု မိမိဩဇာသက်ရောက်လျှက်ရှိသော ဂေဇက်ရွာတွင်း၌ ကြော်ငြာမောင်းခတ်လိုက်လေတော့သတည်း။
ကိုကြောင်ကြီးရေ- အမျှ အမျှ အမျှ
ဘုန်းကြီးပရိတ်ရွတ်တာတောင် မနိုင်တဲ့ကြောင်ကြီး … ရွာသားတွေလဲ ဘယ်စွမ်းနိုင်ပါ့မလဲ ….
ကြောင်ကြီးသူရဲကိုပါ အပါခေါ်လာပြီး မြန်မာပြည်ပြန်လာနိုင်ရင်တော့ အဆင်နိုင်မယ်လို့ အကြံပေးလိုက်ပါရစေ …
ဦးကြောင်ကြီးရေ .. သူကြီးကို ကျွတ်အောင်ချွတ်နော် …
ကျလိကျလိ နဲ ့
ရယ်ချင်လိုက် တာ မှာ
စဉ်းစားစရာ တွေ ပါနေတယ်
ဘာရမလဲ…အဖေကျန်ခဲ ့တဲ ့..၂လုံးထိုးမီးပြောင်းအမွေပေးခဲ ့သေးသဗျား
ရေးနည်း ရေးဟန်တွေ သဘောကျတယ် ဦးကြောင်ကြီးရေ။ကြံကြံဖန်ဖန်တွေးလဲ တွေးတတ်ပ။
အဗျာကတဝတ္ထု ဆိုသည်မှာ တကယ်အရှိ၊ အဟုတ် အနေဖြင့် ပြော၊ ပြု၊ ပြ လို့မရသော အကြောင်းအရာများ ဖြစ်ပါသည်။
ဒိဋ္ဌိအယူစွဲ၏ အာရုံ၊ စိတ္တဇအာရုံတွေသာဖြစ်သည်၊ ( အံ- ၂၊ ၄၄၈ ) ။
ကုသိုလ်ဖြစ်ရေးနှင့်လည်း မစပ်၊ အကုသိုလ်မဖြစ်ရေးနှင့်လည်း မဆိုင်သော အကြောင်းအရာများသာ ဖြစ်ပါသည်၊
ဤအကြောင်းအရာများကို ဘုရားက မဟော၊ မပြော၊ မယူ ပဲနှင့် ဘုရားတပည့်ဟု ဆိုသူတို့က ဟော၏၊ ပြော၏၊ ယူလည်းယူ၏။ ထိုသို့မဖြစ်သင့်ပေ။ မေမြန်းလာခဲ့လျှင် ရှိ/မရှိ၊ ဖြစ်/မဖြစ် စကားလုပ်ပြောစရာကိုပင် မလိုပါ။ ဘုရားပင် ဖြေကြားတော်မမူခြင်းကို ရှိသည်၊ ဖြစ်သည်ဟု အတည်ပေါက် ဟော၊ ပြော၊ ယူနေခြင်းမှာ မိစာ္ဆဒိဋ္ဌိ အစစ်ဖြစ်၏။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အပေါင်းတို့သည် မိမိတို့ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သော ဗုဒ္ဓ၏ တရားစစ်၊ တရားမှန်များကို သိထားဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ဒါမှသာ ဘာသာတရားကို ကိုးကွယ်ရကျိုးနပ်ပြီး၊ ဘာသာတရားကပေးသော ဒုက္ခကင်းရာ၊ ကုန်ရာ နိဗ္ဗာန်သို့ မျက်မှောက်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မိရိုးဖလာကိုးကွယ်မှု၊ အရမ်းရုံ၊ အကန်းရုံ ကိုးကွယ်မှုဖြစ်နေပါက မိမိအတွက်လည်း အကျိုးယုတ်စေသည့်အပြင် တရားဓမ္မအပေါ် အကောက်အယူလွဲမှားမှုကြောင့် မိမိတို့၏ ဗုဒ္ဓသာသနာအတွက်ပင် အကျိုးယုတ်စေပါလိမ့်မည်။ ဘုရားမဟောသော အခြင်းအရာများကို တရားဓမ္မဟုမှတ်ယူပြီး အားထုတ်ခြင်း၊ နှလုံးသွင်းခြင်း၊ ပွားများခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါက နိဗ္ဗာန်သို့ ဦးတည်မည်မဟုတ်၊ ဒုက္ခများနှင့်သာ လုံးထွေးနေရမည်ဖြစ်သည်။
( ၁) လောကသည ်မြဲ၏ ဟူ၍လည်းကောင်း
(၂) လောကသည် မမြဲ ဟူ၍လည်းကောင်း
(၃) လောကသည် အဆုံးရှိသည် ဟူ၍လည်းကောင်း
(၄) လောကသည် အဆုံးမရှိ ဟူ၍လည်းကောင်း
(၅) ထိုအသက်သည် ထိုကိုယ်ဖြစ်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း
(၆) အသက်သည် တခြား၊ ကိုယ်သည် တခြားဖြစ်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း
(၇) သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက် ဖြစ်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း
(၈) သတ္တ္တဝါသည် သေပြီးနောက် မဖြစ် ဟူ၍လည်းကောင်း
(၉) သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက် ဖြစ်လည်းဖြစ်၊ ဖြစ်လည်းမဖြစ် ဟူ၍လည်းကောင်း
(၁၀) သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက် ဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်၊ မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ် ဟူ၍လည်းကောင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။
– ဧကန်တယ် ဖြေဆိုသင့်သည် ( ဧကံသ ဗျာကရဏီ ) လည်းမဟုတ်။
– ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ဖြေဆိုသင့်သည် ( ဝိဘဇ္ဇ ဗျာကရဏီ ) လည်းမဟုတ်။
– မေးပုံမသေချာ၍ တစ်ဖန်ပြန်မေးပြီးမှ ဖြေဆိုရသည် ( ပဋိပုစ္ဆာ ဗျာကရဏီယ ) လည်းမဟုတ်ပါ။
၎င်းကောင်း (၁၀)ချက်သည် ဘုရားဟောတရားနှင့်မစပ်၊ လွှဲမှားသော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ အယသက်သက်မျှသာဖြစ်သောကြောင့် မမေးသင့်၊ မဖြေသင့်၊ မကြံစည်သင့်သော ငြင်းပယ်ရမည့် ပြဿနာမေးခွန်းများသာဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ထိုမေးခွန်များသည် မဖြေဆိုဘဲ ထားရမည့် မေးခွန်းများဖြစ်သည်။
ဘုရားက အဘယ်ကြောင့် မဖြေဆိုဘဲထားရသည်ကို ဟောကြားရာ၌ ဤသို့ကြံစည်ခြင်းသည် ယုတ်ညံ့သည်၊ အကျိုးစီးပွားနှင့်မစပ်၊ မဂ်တည်းဟူသော အကျင့်မြတ်၏ အစမဟုတ်၊ ငြီးငွေ.ရန်၊ တပ်မက်ခြင်းကင်းရန်၊ ဒုက္ခချုပ်ရန်၊ ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရန်၊ ထူးသောသာဏ်ဖြင့်သိရန်၊ ကိုယ်တိုင်သိရန်၊ တဏှာမှ လွတ်မြောက်ရန် မဖြစ်ဟု ဟောပြောခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရား၏ ဟောကြားချက်ကို ထောက်ချင့်ခြင်းအားဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အပေါင်းတို့သည် ဤု အဗျာကတဝတ္ထု များအား ဒုက္ခသို့သွားရာလမ်းအဖြစ် မှတ်ယူ၍ ကြံစည်ခြင်းမပြု၊ ရှောင်ကြဉ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
သေပြီးနောက် ဖြစ်၊ မဖြစ် အယူများလက်ခံထားပြီး ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာများ ပြုလုပ်နေကြပါက ဘုရား၏ အလိုကျ ကုသိုလ်ပြုခြင်းများ မဟုတ်တော့ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များပင် မဟုတ်ဟုပြောရပေတော့မည်။
“လောကသည ်မြဲ၏ ဟူ၍လည်းကောင်း” ၊ “လောကသည် မမြဲ ဟူ၍လည်းကောင်း” ၊
“လောကသည် အဆုံးရှိသည် ဟူ၍လည်းကောင်း” ၊ “လောကသည် အဆုံးမရှိ ဟူ၍လည်းကောင်း” ၊
“ထိုအသက်သည် ထိုကိုယ်ဖြစ်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း” ၊ “အသက်သည် တခြား၊ ကိုယ်သည် တခြားဖြစ်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း” ၊
“သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက် ဖြစ်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း” ၊ “သတ္တ္တဝါသည် သေပြီးနောက် မဖြစ် ဟူ၍လည်းကောင်း” ၊
“သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက် ဖြစ်လည်းဖြစ်၊ ဖြစ်လည်းမဖြစ် ဟူ၍လည်းကောင်း” ၊ “သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက် ဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်၊ မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ် ဟူ၍လည်းကောင်း” ဤသို့ ယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ်စိတ်ကို မကြံစည်ကုန်ရာ။
ဤသို့ကြံစည်ခြင်းသည် ယုတ်ညံ့သည်၊ အကျိုးစီးပွားနှင့်မစပ်၊ မဂ်တည်းဟူသော အကျင့်မြတ်၏ အစမဟုတ်၊ ငြီးငွေ.ရန်၊ တပ်မက်ခြင်းကင်းရန်၊ ဒုက္ခချုပ်ရန်၊ ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရန်၊ ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိရန်၊ ကိုယ်တိုင်သိရန်၊ တဏှာမှ လွတ်မြောက်ရန် မဖြစ်။
ကြံစည်လိုကြလိုကြကုန်သော် “ဤကား ဆင်းရဲတည်း” ဟု ကြံစည်ကုန်ရာ၏။ “ဤကား ဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်ရာ အကြောင်းတည်း” ဟုကြံစည်ကုန်ရာ၏။
(အဘယ်ကြောင့် ထိုကဲ့သို့ ကြံစည်ရသနည်း)
ထိုကဲ့သို့ကြံစည်ခြင်းသည် အကျိုးစီးပွားနှင့်စပ်၏၊ မဂ်တည်းဟူသော အကျင့်မြတ်၏အစ၊ ငြီးငွေ.ရန်၊ တပ်မက်ခြင်းကင်းရန်၊ ဒုက္ခချုပ်ရန်၊ ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရန်၊ ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိရန်၊ ကိုယ်တိုင်သိရန်၊ တဏှာမှ လွတ်မြောက်ရန် ဖြစ်၏။
ရဟန်းတို့ ထို့ကြောင့် “ဤကား ဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်ရာ အကြောင်းတည်း” ဟုသိရန်အားထုတ်ရမည်။ သို့မှသာနိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်တည်း။
( ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် သာသနာရေးဦးစီးဌာန ပုံနှိပ်တိုက်မှ ရိုက်နှိပ်သော ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာတင် ပိဋကတ်တော် သံယုတ်ပါဠိတော် (မြန်မာပြန်) တတိယတွဲ၊ စာမျက်နှာ ၃၇၁ မှ သုတ်အမှတ်စဉ် ၁၀၇၈၊ စိန္တသုတ် )
ဂလိုရှိသဗျ သဂျီးရ။ ကံ၊ ကံ၏အကျိုး၊ ရှေးနောက်ဘဝ သံသရာ၊ ငရဲနတ်ပြည်၊ ဈာန်အဘိညာဉ် တန်ခိုး တို့ဆိုတာ ပညတ်သစ္စာတွေလို့ခေါ်တယ်။ ဘုရားပွင့်ပွင့် မပွင့်ပွင့် လောကမှာ ရှိနေမှာတွေ၊ ယခင်ကလည်း ရှိခဲ့တယ်၊ နောင်လည်းရှိအုံးမှာပဲ။ ဘုရားပွင့်လာတော့ အဲဒါတွေကို အဟုတ်ထင်မှတ် ကျင်လည်နေတာတွေ ကနေ လွတ်မြေက်ခွင့်ရတယ်။ သဂျီး ပေးထားတဲ့ တရားတော်ကောက်နုတ်ချက်ကို ပြန်ကြည့်ရင် ဘုရားရှင်က အဗျာကတာဝတ္ထုတွေသည် (ဗဟုသုတ ရလို့ကျေးဇူး) ငါ့တရားမဟုတ်ဆိုတာ နဲ့စပ်ဆက်တွေးနိုင်တယ်။ နိဗ္ဗာန်ရောက် တရားမဟုတ်၊ ဒါကြောင့် မကြံစည် မတွေးတောအပ်၊ ငါလည်း အချီးနှီးမဲ့ ဖြေမှာမဟုတ်လို့ ရေးထားတယ်။ အဲဒါတွေသည် မရှိလို့ ငြင်းမထားဘူး။ ဥပမာဗျာ ဖန်ဆင်းရှင် မရှိလို့ အတိအလင်းငြင်းတယ်၊ မိမိကိုယ်စား သူများက အပြစ်ဝင်ခံပေး မရလို့ အတိအလင်းဆိုတာ သတိပြုသင့်တယ်။
သဂျီးပြောချင်တဲ့ အဗျာကတာဝတ္ထုတွေသည် စိတ္တဇဖန်ဆင်းမှု ကြောင့်ဆိုတာ ဓမ္မသဘောအရ အမှန်ဘဲ။ ၃၁ဘုံအားလုံးသည် ပညတ်သစ္စာတွေ၊ စွဲလန်းမှုတဏှာကြောင့် အဟုတ်ထင်နေလို့ ရှိနေတာ၊ တကယ်တမ်း တည်မနေဘူး။ တကယ်သိသူများ ရဟနာ္တအဖြစ် ကျွတ်တမ်းဝင် သံသရာပြတ်တယ်။ ပရမတ်သစ္စာနဲ့ ပညတ်သစ္စာကို သတ်လိုက်တာ။ သဂျီးတို့၊ ပစ္စုပ္ပန်ဝါဒီတွေကရော ရုပ်၊ နာမ်သဘောကို သေချာသိပြီလား၊ ကိလေသာ အာသဝေါ ကုန်ခမ်းသွားကြပြီလား။ စာဖတ် ဆင်ခြင်တွေးတော ရုံမျှနဲ့တော့ ဘုရားဟော သဘာဝ သစ္စာကို သိပြီမထင်လိုက်နဲ့။ ဘဝများစွာ ပါရမီဖြည့်၊ အရိုးကြေကြေ အရေခမ်းခမ်း ကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးမှ သစ္စာသိမြင် ကျွတ်တမ်းဝင်သွားသူများကို အားနာစရာကြီး…။
ဘာဖြစ်လို့.. ဘုရားစကားကို.. ပြန်ဖွင့်ပြီး ဘုရားထက်ခေါင်းတလုံးသာချင်ရသလည်းကွယ်..။
(ဒါမှမဟုတ်) သာချင်နေသူတွေစကား နာခံနေရသလည်းကွယ်..။
အရိယာမဟုတ်သူတွေရဲ့..ဘုရားစကားပွဲစားလုပ်ပြန်ပောာတာတွေ(ပွဲစားလုပ်နေတာတွေ)အတည်မယူပဲ.. ဘုရားစကား(တရား)တိုက်ရိုက်ဖတ်ပြီး. စိစစ်စေလိုပါတယ်..။
ပွဲစားတွေပြန်ဟောပြောတာလား.. ဘုရားကတိုက်ရိုက်ဟောတာလား.. . ဒီလိုခေတ်မှာ.. အိနိ္ဒယ၊သီရိလင်္ကာ၊ တရုတ်၊ ဂျပန် စသဖြင့်မူကွဲတွေ..လိုက်ဖတ်… အကုန်ပြန်စိစစ်လို့ရပါတယ်..။
ရှေ့ဘဝ နောက်ဘဝ အယူကို မယူပါ။
၁။ ဘဂဝတာ၊ မြတ်စွာဘုရားသည်။ ဓမ္မော၊ တရားတော်မြတ်ကို။ သွာက္ခာတော၊ အစ, အလယ်, အဆုံး သုံးပါးအစုံ ကောင်းခြင်းဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံစွာ ဟောကြားတော်မူအပ်၏။
၂။ ဓမ္မော၊ တရားတော်မြတ်သည်။ သန္ဒိဋ္ဌိကော၊ ကျင့်ဆောင်သူတို့အား ယခုဘဝပစ္စက္ခ၌ပင် ဒိဋ္ဌကိုယ်တွင် တွေ့မြင်ခံစားရသော ဂုဏ်ကျေးဇူးအထူးနှင့်လည်း ပြည့်စုံတော်မူပေ၏။
၃။ အကာလိကော၊ ကာလမရွေ့ ကျင့်သည့်နေ့ပင် တွေ့မြင်ယုံကြည်ရသော ကောင်းကျိုးချမ်းသာနှင့်လည်း ပြည့်စုံတော်မူပေ၏။
၄။ ဧဟိပဿိကော၊ လာရောက်ရှုမြင် ကျေးဇူးတင်မြဲဖြစ်၍ လာပါ ရှုပါ, ကျင့်ကြံပါဟု မပါပါအောင် ခေါ်ဆောင်သွတ်သွင်း တိုက်တွန်းခြင်းငှာ ထိုက်တန်စွာသော ဂုဏ်ထူးဝိသေသနှင့်လည်း ပြည့်စုံတော်မူပေ၏။
၅။ ဩပနေယျိကော၊ မိမိကာယ အဇ္ဈတ္တတွင် ရရှိပေါက်ရောက် ကိုယ်တွေ့မြောက်အောင် ကပ်၍ဆောင်ထိုက်သော ဂုဏ်ထူးဝိသေသနှင့်လည်း ပြည့်စုံတော်မူပေ၏။
၆။ ဝိညူဟိ၊ ပညာရှိသူ ရှင်, လူအပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့သည်။ ပစ္စတ္တံ၊ အသီးသီးသော မိမိတို့သန္တာန်၌။ ဝေဒိတဗ္ဗော၊ ချမ်းသာလေစွ ကောင်းလေစွဟု ကာယ, စိတ္တ သုခနှစ်ပြင် ထင်ထင်ရှားရှား ခံစားသိမြင်ရသော ဂုဏ်ထူးဝိသေသနှင့်လည်း ပြည့်စုံတော်မူပေ၏။
ဗုဒ္ဓသည် ဖန်ဆင်းရှင်ဟူသော ဆင်ခြေတက်မှုကြီးစိုးခဲ့သော ခေတ်ကာလတွင်ယင်းအရာသည် အလျင်းမရှိဟု အကြိုးအကြောင်းတို့နှင့် ထင်ရှားပြသက်သေထူခဲ့သော်လည်း၊ သာဿနာအနှစ်သုံထောင်ပြီးသည့်တိုင်၊ အတိတ်၊ပစ္စုပ္ပါန် နှင့် အနာဂါတ် ကာလ(၃)ပါးတို့တွင် သို့လော၊ သို့လော ဟူသောဒွိဟရှိသူတွေ ရှိနေသေးသရွေ့ သံသရာဟူသော ဝေါဟာရသည်ပေါ်ထွန်းလာရသည်မဟုတ်ပါလော။ ကံ၊စိတ်၊ဥတု နှင့် အဟာရ တို့၏မှန်ခြင်းကမဖေါက်မပြန်မှုတို့ တရားတော်တွင် ထင်ရှားရှိနေကြသော်လည်း၊ လူနှင့် (၃၁)ဘုံသားတို့ ကယနေ့တိုင်မိန်းမောသာယာမှုနောက်ကိုလိုက်နေကြသည်။ နောင်လည်းလိုက်နေကြမည်ဦးသာ။
ကံကို မိန်းမောမှုနှင့်ရောချကြသူတွေ နှင့် ကံကို ကိုယ်ကလုပ်လို့ရတာ၊ ကိုယ်ကကြံလို့ရတာ၊ ကိုယ်က အာရုံ(၅)ပါးတွင်ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်လာစေလို့ရခြင်းဟူ ကွဲပြားခြားနားသိကြတွေ အကွာကြီးကွာကြသည်ကိုသတိချပ်ကြပါကုန်။
(ဒါမှမဟုတ်) သာချင်နေသူတွေစကား နားခံနေရသလည်းကွယ်..။
သဗ္ဗညု ဆိုတဲ့ ဉဏ်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်သူ ရယ်လို့ ဗုဒ္ဓတစ်ဦးတည်းတည်းသာရှိတယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့၊ ဗုဒ္ဓက လောကမှာဖြစ်ပျက်သမျှတွေကို ထင်ရှားပြခဲ့တာဘဲရှိပါတယ်။ ဖန်ဆင်းပြခဲ့ခြင်းအလျင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဟာ ဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်ခဲ့သလို၊ သူဟာဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတဲ့ အယူဝါဒကို ငြင်းပယ်ခဲ့သူဖြစ်လို့ပါဘဲ။ သူပြောခဲ့တာတွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးရှင်းပြခဲ့ တဲ့ အဘိဓမ္မာကို ဒီနေ့အထိနားမလည်နိုင်ကြသူတွေကမရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိကြပါသေးတယ်။
ကံကို ရိုးကြသူတွေ ကံရဲ့ ကျိုးကြောင်းဖြစ်စဉ်ကိုနားလည်ရခက်လှချည်ရဲ့ ညီးကြသူတွေ ဒွိဟဖြစ်ကြသူတွေ ပေါတဲ့ အတွက် သံသရာဆိုတဲ့ခြားရဟတ်ကြီးကလည်း မရပ်မနားလည်နေတုံးပါနော်…။
ဦးကြောင်ကြီး ဧ။်မြွက်ကြားချက်များ အင်မတန်မြင့်နေသည့်အတွက်ကြောင့် လိုက်မမှီတော့ပါ::::::::
real creative writing!!! bravo
ရှေ့ဘဝ နောက်ဘဝ ဟူသည် သမုတိသစ္စာ အားဖြင့် တကယ်ရှိလေသည်။ ယခု ပစ္စုပ္ပါန်ဘဝကို အဟုတ်ထင် အတည်ယူ အရှိယူက ရှေ့ဘဝ နောက်ဘဝ ကို ရှိသည်ယူရပေမည်။ ယခု တစ်နာရီကို အရှိယူက ယခင်တစ်နာရီ နောက်တစ်နာရီ ကို အရှိယူရပေမည်။
ပရမတ်သစ္စာ အလိုအားဖြင့် သမုတိသစ္စာ ကို မပယ်ရပဲ … မတွယ်စေရန် အတွက် အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ တရား ကို သာ အတည်ယူပြီး အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပါန်၊ အနာဂတ် (အချိန်စွဲ )ရှေ့ဘဝ နောက်ဘဝ ယခုဘဝ အယူကို စွန့် ရလေသည်။
ဆိုလိုသည်ကတော့ အတိတ်၊ အနာဂတ်ကို မရှိယူလိုသော် ပစ္စုပ္ပါန်ကို လည်း မရှိယူရလေသည်…
တချို့သော ကိုယ်လိုရာဆွဲ ယူသူ ပစ္စုပ္ပါန်သမား ဆိုသူများသည် (သဂျီး နှင့် ကိုယိုတို့ဟု ကိုကြောင်ကြီးကပြောပါသည် း) သမုတိသစ္စာ ထဲမှ ပစ္စုပ္ပါန်ဘဝကိုကျတော့ အဟုတ်ထင် အတည်ယူ အရှိယူကာ အနာဂတ်၊ အတိတ် ကို ပယ်ရန်ကြိုးစားလေသည်။ မိမိဖာသာ ပယ်ခြင်းမှာ အကြောင်းမဟုတ်သော်လည်း သမုတိသစ္စာရှုထောင့်မှ နေ၍ သမုတိသစ္စာ ပစ္စုပ္ပါန်ဘဝကို တော့ အတည်ယူ အရှိထင်ပြီး……..ဘုရားဟော ပရမတ်ရှုထောင့်မှ အမြင် အတိတ်ဘဝ ၊ နောက်ဘဝ ၊ ယခုဘဝ (အချိန်စွဲ)ကို ဖြုတ်သော စကားလုံးများကို ကိုးကားလျှက် ဘုရားကပဲ အတိတ်ဘဝ ၊ နောက်ဘဝ သမုတိသစ္စာကို ပယ်လေဟန် လီဆည် ရေးသားကြကုန်သည်။
ပရမတ်ဉာဏ်အမြင် ပေါက်အောင် အားထုတ်ခြင်းမရှိပဲ …ပညတ်တရားကို ပယ်ဖို့ကြိုးစားသူတို့ အပယ်လမ်းက ဒိုးယိုးပေါက်နေမည်ဆိုသည်ကိုတော့…….
ယခုဘဝ၊ နောက်ဘဝ စသည့်ဖြင့် ဘဝဆိုတာ ….တွေ့ကြုံဖို့သက်သက်…..ဆုပ်ကိုင်ဖို့မဟုတ် ….ပယ်ဖို့လည်းမဟုတ်…တွယ်ဖို့လည်းမဟုတ်။
ဦးကြောင်ကြီး ကြုံကြိုက်တုန်း တခါတည်းသာ အကျွတ်တရား ရအောင် လုပ်ပလိုက်ပါ။
အိမ်မှာ သွားခြောက်လို့ ပုဆိုးကျွတ်တာ ကို ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်။
ဝါတာကာလာ ဂိုဏ်းချုပ်ကြီး ကြောင်သိုင်းနဲ့ ဖြိုခွင်းခံရတော့မလားပဲ..
သူဒို့ဂဘဲ သဂျီးကို ချွတ်ကြလေဒယ်ဆိုဒေါ့ဂါ
အဲဒီ ပိုက်ဆံ မောင်ခိုင် ကို မပေးပဲ သားကို ပေးပါလား..
ကြားဝင်လုပီး ဖြတ်ကနဲ့ပြေးမှ ၊ ငွေသံကြားရင် မနေနိုင်ဘူး ၊
ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟု ခေါ်သော အတ္တကောင်သည် ပျက်စီးခြင်းမရှိ
တစ်နေရာရာ၌ တည်မြဲလျှက်ရှိသည်ဟု ယူဆပြောဆိုသော ဝါဒသည်
အဆင်သင့်သည် အားလျှော်စွာ အလိုလိုဖြစ်ပေါ်သည်ဟု
ယူဆ ပြောဆိုသော ဝါဒသည်
ပကတိ အဏုကာလ စသည်တို့၏ အစွမ်းအားဖြင့်
လောက ဖြစ်နေသည်ဟု ယူဆပြောဆိုသောဝါဒသည်
ဝိသမဟေတုဝါဒ မညီညွတ်သောအကြောင်း မှားယွင်းသောအကြောင်းကို
ဣဿပုရိသ ပဇာပတိဟုခေါ်သော ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည် ဟု
ဝသဝတ္တိဝါဒ ဘုရားသခင်၏ အလိုတိုင်းဟု ယုံကြည်သော ဝါဒမည်၏။
သေသောအခါ သတ္တဝါသည် လုံးဝမရှိတော့ဘဲ ပြတ်စဲသွားသည်ဟု
ယူဆ ပြောဆိုသောဝါဒသည် ဥစ္ဆေဒ ဝါဒမည်၏။
ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံ အကျိုးမရှိဟု ယူဆ ပြောဆိုသောဝါဒသည်
နတ္ထိက ဝါဒ မည်၏။
သတ်ခြင်း ခိုးယူလုယက်ခြင်း စသည်ကိုပြုသော်လည်း အကုသိုလ်ကံမဖြစ်
ပေးလှူခြင်း သတ်မှု့မှ ရှောင်ကြဉ်ရှောင်ခြင်း စသည်ကိုပြုသော်လည်း
ကုသိုလ်ကံမဖြစ်ဟု ယူဆ ပြောဆိုသော ဝါဒသည် အကိရိယ ဝါဒမည်၏။
ဒါကတော့ စာအုပ်ထည်းက အတိုင်း ကူးရေးလိုက်တာ
အသက်ရှင်စဉ် ( မိမိအယူဖြင့် ) ကောင်းမှု့ လုပ်ပြီး
နတ်ရထား မျှော်တဲ့ ကိုကြောင်ကြီးရဲ့ အယူဝါဒကတော့
ဘာဝါဒဆိုတာ သိသူများ ဖြေကြားကြစေကုန်သတည်း
သူကြီးဝါဒ ကတော့ ဥစ္ဆေဒ ဝါဒ ပဲဗျို့ ။ ကို ဂျော်နီအောင်ပုရဲ့
ကျုပ်က.. အဲဒီအယူကို.. မယူတဲ့သူပါ..။ မယူတာနဲ့.. ရှိတယ်..မရှိဘူး ပြောတာနဲ့ မတူပါဘူး..။ ရှိသလို..မရှိသလိုလို..နဲ့လည်း မတူပါဘူး..။
နားမလည်ပဲ ရှုပ်ထွေးနေကြဟန်တူတယ်..။ အောက်က စာတွေသေသေချာချာ ဖတ်ကြည့်ပြီး.. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်… ဘယ်လိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ဖြစ်နေလည်း ဝေဖန်ကြည့်ပါ..။
ထိုအခါ တပါးသောရဟန်းသည် အကြင်အရပ်¸ မြတ်စွာဘုရား ရှိတော်မူ၏။ ထိုအရပ်သို့ ချည်းကပ်လေ၏။ ချဉ်းကပ်ပြီး မြတ်စွာဘုရားကို အလွန်ကိုင်းရှိုင်း စွာ
ရှိခိုးပြီးလျှင် သင့်တင့်လျှောက်ပတ် သောအရပ်၌ထိုင်နေ၏။
ထိုရဟန်းသည် မြတ်စွာဘုရားကိုဤသိ ု့လျှောက်၏။
ììမြတ်စွာဘုရား…အကြင် ့ကြောင့် များသောအကြားအမြင်ရ ှိ သော အရိယာဖြစ်သောတပည့်အ ားဤအရာသည်သာ ဟုတ်မှန်၏ဟု ဧကံသ အားဖြင့် မဆိုအပ်သောအရာ အဗျာကတဝတ္ထုတို့၌သို့ လော သို့လော တွေးတောယုံမှားမှုဝိ စိကိစာ္တသည် မဖြစ်။ ထိုသို့ ဝိစိကိစာ္ဆ မဖြစ်ခြင်း၏ အကြောင်းရင်းကား အဘယ်ပါနည်း၊ အထောက်အပံ့ကား အဘယ်ပါနည်းဟု မေးလျှောက်လေ၏။
အို-ရဟန်း…များသောအြ ကားအမြင်ရှိသော အရိယာဖြစ်သော တပည့်အား မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၏ချုပ်ခြင ်းကြောင့် ဧကံသအားဖြင့် မဆိုအပ် သောအရာအဗျာကတဝတ္ထုတို ့၌ သို့လောသို့လော တွေးတောယုံမှားမှု ဝိစိကိစာ္ဆသည် မဖြစ်။
အို-ရဟန်း…သတ္တဝါသည် သေသည်မှနောက်၌ဖြစ်၏ ဟူသော ဤအယူသည် မှားယွင်းသောအယူ မိစာ္ဆဒိဋ္ဌိပေတည်း။
အို-ရဟန်း…သတ္တဝါသည် သေသည်မှနောက်၌မဖြစ် ဟူသောဤအယူသည် မှားယွင်းသောအယူ မိစာ္ဆဒိဋ္ဌိပေတည်း။
အို-ရဟန်း…သတ္တဝါသည် သေသည်မှနောက်၌ဖြစ်သ ည်လည်းဟုတ်၏၊ မဖြစ်သည်လည်းဟုတ်၏(=အ ချို့ဖြစ်-အချို့မဖြ စ်) ဟူ သောဤအယူသည် မှားယွင်းသောအယူ မိစာ္ဆဒိဋ္ဌိပေတည်း။
အို-ရဟန်း…သတ္တဝါသေသည ်မှနောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်၊ မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ် ဤအယူသည် မှားယွင်းသောအယူ မိစာ္ဆဒိဋ္ဌိပေတည်း။
အင်း…. ဦးကြောင်ကတော့ လုပ်တော့မယ်…. လိုနေတဲ့တစ်ပြား ဖြည့်ပေးပါမယ်… နောက်ဆုံး စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့သွားပါနော်….. အဟိ
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ကိုးရာကိုးဆဲ့ကိုးသန်း ကိုးသိန်းကိုးသောင်း ကိုးထောင်ကိုးရာ ကိုးဆဲ့ကိုးဒေါ်လာ ကိုးဆဲ့ ကိုးပြားကြီးများတောင်…
ကိုယ်တိုင်တော့ သေရင် အဲဒီငွေကြောင့် ကျွတ်မှာမဟုတ်ဘူး
I don’t know how did they learn Buddhism when they were away from Burma.
May be they are quite ambitious in Buddhism.
All are positive conversation. Good to read & get the knowledge as well.